Ambondromamy Lehilahy iray maty novonoin’ny dahalo
Toamasina Jiolahy 3 rotiky ny bala, 3 azo sambo-belona
Andravoahangy sy ny manodidina Mirongatra ny haro-paosy
Fanafihana mpivady tao mahajanga Olona 5 no tratra, tsy ampy taona ny 2
Ambatondrazaka Zaza tsy ampy taona 6 tratra namaky trano
ANDAPA Vehivavy 7 no nisy namono tao anatin’ny sivy volana
Tovovavy iray efa tsy nisy fofon’aina intsony indray omaly no hita faty tany amin’ny distrikan’Andapa, Faritra SAVA.
Niova filamatra tanteraka ireo dahalo any amin’iny distrikan’Ambondromamy iny amin’izao.
Hatramin’ny tsy nisian’ireo taxi-brousse mandalo sy sakananin’izy ireo sy tafihiny telo aloha mantsy dia lasa ireo mponina no aripany. Tokantrano iray tao Ambondromamy no lasibatr’izany, ny herinandro lasa teo. Lasan’ireo tsy mataho-tody tamin’izany avokoa ny fananana rehetra. Ankoatra izay dia mbola novonoiny ihany koa ilay Raim-pianakaviana mpitarika ny ankohonana. Notapahiny ny loha sy ny tananan’ity farany ka namoy ny ainy tsy fidiny izy. Raha ny fantatra hatrany anefa dia mbola kely anaka ity Raim-pianakaviana ity. Vao tapa-bolana monja ny zanany farany. Miantso ny fandraisan’andraikitry ny fitondram-panjakana ireo mponina any an-toerana mba hijery akaiky ny zava-misy.